Kedu usoro esi esi nri kachasị mma? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Zọ kachasị mma iji sie anụ - ngwọta na-arụ ọrụ
Zọ kachasị mma iji sie anụ - ngwọta na-arụ ọrụ
Kedu usoro esi esi nri kachasị mma?
Steam na esi
Mmiri-okpomọkụụzọ esi nri, dị ka esi na uzuoku, bụahụikeụzọ iji kwadebe anụ na mepụta n'ihi na ha emee na okpomọkụ dị ala.Jenụwarị 8 2020bọchị 2020
Ozugbo i tinyere akwụkwọ nri na nri gị, ị gbasiri ike, nri? Ọ bụchaghị. Ebe ọ bụ na ị na-eri akwụkwọ nri mgbe niile apụtaghị na ị ga-enweta nri niile ha ga-enye. Ohere ka ị sie nri inine gị n'ụzọ na-ezighi ezi ma tinye obere ma ọ bụ enweghị vitamin na eriri.
Ndewo ndị na-ekiri ma nabata Bestie! Ewezuga ịmetụta uru nri, ụzọ ị ga-esi esi nri gị ga-emetụ ụtọ ha - ọ bụghị n'ụzọ dị mma. Ọ bụrụ n’ịchọrọ inweta uru kacha mma na-edozi ahụ maka kalori calorie gị, nke ahụ ga-akwadebe ma sie nri inine gị nwere ike ime nnukwu ọdịiche, na n’isiokwu taa anyị ga-egosi gị mmejọ iji zere ma ọ bụrụ na ị naghị esi ha ma ọlị. , sie oke nri, sie nri mgbe mmiri dị, tinye oge sizinin, ịba ụba pan, na ọtụtụ ndị ọzọ, lelee ruo na njedebe iji chọpụta ihe niile gbasara ha. Ikpori akwukwo nri: Imu mmanu akwukwo nri gi tupu ịmalite isi nri di ka uzo nzuzu iji zere ha ka ha ghara ibanye n'ime ite; dị mwute ikwu na, na-agbakwunye mmanụ enwekwu Ohere nke Inine na-acha dị ka na mmanụ na-akawanye oké ọkụ; kama, gbakwunye mmanu nke mmanu oliv na-amaghi nma na pan, tinye akwukwo nri.
Gaghị echegbu onwe gị maka ihe ọ bụla na-arapara na pan ma ọ bụ inine akpọrọ akpọ. Kedu akwụkwọ nri ị ga-achọ itinye na nri gị kwa ụbọchị? Olee nke ị ga-agbara ọsọ? Ọ ga-amasị anyị ịmata ihe ndị a n'okpuru! Esila nri ma ọlị: Ọtụtụ akwụkwọ nri na-adị mma mgbe ha na-ata nri, ma ọ bụghị ha niile. Beetroot, broccoli, yabasị, na ose nwere ihe ndị ọzọ na-edozi ahụ, ma ndị ọzọ na-edozi ahụ mgbe ha na-ewe iwe.
Asparagus nwere akụrụngwa na-alụ ọgụ kansa na-arụ ọrụ mgbe ọ na-agba mmiri. Mushrooms na-enyekwu potassium mgbe etinyere ya n'ọkụ, ma ọ bụ n'ọkụ. N'oge nri inine na-atọ ụtọ nke ọma na salad, ị nwere ike nweta calcium, iron, na magnesium na esium gị site na nri esiri esi.
Ọzọkwa maka tomato - ị na-enweta lycopene na-alụ ọgụ kansa karịa mgbe esiri ya, yabụ ọ bụ ezigbo echiche iri ọtụtụ akwụkwọ nri, ọ bụ ezie na ụfọdụ esiri ya na usoro ntụziaka dị ịtụnanya.Prepearing Akwụkwọ nri n'oge na-adịghị anya: peoplefọdụ ndị na-achọ ịga n'ihu ma rụọ ọrụ n'ihu oge na obughi na oge ikpeazu Ọ bụ ezie na nke a bụ ezigbo mma maka ụfọdụ ihe, ọ naghị arụ ọrụ maka akwụkwọ nri mgbe niile.
Ọ bụrụ na ịsaa ma belata ya, nsị na ikuku na-edozi ahụ ga-amalite, dị ka ọ ga-akpọnwụ ma mebie. Ka mma belata akwukwo nri gi tupu i jiri ha. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịhị ya tupu oge eruo, emela ya ọ bụla tupu ụtụtụ ma ọ bụ abalị ahụ.
Otu ihe ahụ bụ ịsa na ịkwadebe inine. Ozugbo ịsacha akwụkwọ nri ha bidoro kpọnwụọ, yabụ emekwala ya ruo mgbe i ji ha. Ọ bụrụ na ị ga-asacha ha tupu oge eruo, tinye ha n'ime akpa nwere akwa mpempe akwụkwọ gbara ha gburugburu iji banye mmiri ọ bụla.
Boilingụ oke mmiri: Isi nri nwere ike ịbụ ụzọ dị mfe iji dozie akwụkwọ nri gị, mana ọ bụkwa ụzọ dị mfe iji kpochapụ ihe na ngwa ngwa n'oge na-adịghị anya. Mgbe ị na-esi nri, mmiri na-amịkọ mmiri sitere n’ inine na-abanye n’ime mmiri esi nri. Esi esi nwekwara ike iduga esi na mmiri, mee ka ọ dị nro, isi awọ na mushy.
Akwukwo nri kwesiri ighari na mmiri esi mmiri mgbe ha na-eme ofe na ihe omume, nani obere oge. Ọ bụrụ na ị na-etinye ha na mmiri esi mmiri ka ọ dị nro, mee naanị nkeji ole na ole ma tinye ha n'ime mmiri ịsa ahụ tupu ha agbapụ agba agba. Jiri usoro ndị ọzọ nke isi nri inine dị ka uzuoku, ịcha ahịhịa, ịkwa amị, ma ọ bụ ịkwa nri.
Ọ bụghị naanị akwụkwọ nri ka ekpughere akwụkwọ nri na obere oge, mana ọ na-enyekwa ọtụtụ nhọrọ maka ịgbakwunye ekpomeekpo na oge. Ijuju Pan: Mgbe ụfọdụ mgbe ị na-eme ọsọ ọsọ, ịnwere ike itinye ọtụtụ akwụkwọ nri n'ime pan iji sie nri. Ọ bụrụ na ị jujujuo pan ahụ, kama iji caramelizing, nri ahụ ga - enwu ọkụ, sie ma ọ bụ sie ike.
Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị tinye nri na mmanụ, ọnọdụ okpomọkụ nke mmanụ ahụ ga-ada, n'ihi ya, ọbụghị ya esi na ọnọdụ kachasị mma. Ọ bụrụ na itinye ụyọkọ agwa niile na pan ma ọ bụ wok n'otu oge, ha ga-enweta mushy. Tinye naanị akwụkwọ nri ole na ole n’ime otu akwa dị ka o kwere mee n’oghere ụfọdụ; mgbe ị nwere nri ndị ọzọ iji sie, mee ya n'ọtụtụ bat ma ọ bụ jiri pan ma ọ bụ wok nke ị nwere.
Umgbagharị nke Akwukwo nri: Ọ bụ ezie na ị hụrụ n'anya ekpomeekpo ekpomeekpo gị grill na-enye na skewers akwukwo nri, ebe dị ọkụ na akọrọ nwere ike mebie nri gị. Nke ka njọ bụ na ọ bụrụ na ị hapụ ha ka ha gwọọ ogologo oge ka ha wee mepee oji dị oji, ọ bụ ihe na-egosi na ekpughere inine na benzopyrene, kemịkal na-ebute ọrịa kansa na anwụrụ anwụrụ. mafere kebab ma sie nri gị na nkụ na kama.
Usoro a na-ewepụ ihe ize ndụ nke iri char dị egwu ma na-enyere akwụkwọ nri aka ijigide mmiri ha, vitamin, na mineral. Nọgide na-ajụ oke ọkụ ma mafee mmanụ nke oliv tupu ị kpoo akwụkwọ nri gị. Site na ịtọ ya nkụ ma tinye abụba mgbe emesịrị, ị nwere ike belata anwụrụ ọkụ na-eri antioxidant.
Ha tufuo akụkụ ọma ya: ole ka ị na-enwe stalk na epupụta nke broccoli ma tụba ya na ahịhịa? Ma ọ bụ bee kukumba na nduku peels? Ihere emela gị ma ọ bụrụ na ị na-eme ya oge ụfọdụ - ọ bụ mmeghe a na-ahụkarị. Ma ugbu a, ọ bụ oge ịgbanwe àgwà gị wee kwụsị iri nri na-edozi ahụ nke akwụkwọ nri. Akpụkpọ anụ, epupụta, na stems nwere nri pụrụ iche anaghị ahụ n'akụkụ ndị ọzọ nke akwukwo nri.
Ha nwekwara ịrịa vitamin dị elu karịa akụkụ ndị na-ahụkarị Nzọụkwụ site na ndị na-edozi ahụ ma zuo ike na Chop-n-Toss. Jiri broccoli stems na epupụta na fris-fries, soups na salads maka hefty dose nke ahụike na-akwalite nri. Ha na-ata nri na oke okpomọkụ: Akwụkwọ nri a roara n'ọkụ nwere ike ịgbanwe ọbụna ndị kpọrọ asị asị na-akwado ya.
Ma ọ bụrụ na ihe ị na-esi n’ọkụ adịghị agba aja aja na nke chara acha na mpụga, dị nro ma nwee ude mmiri n’ime, i Ihe mehiere ma ọ nwere ike bụrụ ọnọdụ okpomọkụ. Ogologo 400-450 bụ ebe dị ụtọ maka ọtụtụ akwụkwọ nri iji nweta ọmarịcha mpụta ahụ na-atọ ụtọ ma n'otu oge ahụ jide n'aka na esiri ya n'ime. Ọ bụghị naanị na ezigbo ọkụ okpomọkụ a ga-atụle mgbe amịkpọ inine, ihe ziri ezi pan ga-abụ .Baking trays bụ zuru okè pan maka ighe akwụkwọ nri n'ihi na ha ala n'akụkụ.
bmc okporo ụzọ igwe nyocha
Ihe ọ bụla dị elu ga-egbochi mmiri ahụ ịpụ, nke nwere ike ibute akwụkwọ nri mushy. Isi nri inine mgbe mmiri mmiri: ị nwere ike ọ gaghị amata na ị na-emehie ihe a. Washingsacha akwụkwọ nri gị dị mma, mana ịmịchaghị tupu ị sie nri nwere ike imebi nri dị mmiri mmiri.
Ọ bụrụ na ha dị oke mmiri, mmiri ahụ ga-emepụta uzuoku nke ga-ebute nri mushy. Ihicha nke ọma ga-eme ka akwụkwọ nri gị dị nfe. Ihe oriri na-eri mmiri nwekwara ike ịbụ ihe ize ndụ ma ọ bụrụ na etinye ya na pan na-ekpo ọkụ na mmanụ.
Tupu ị na-esi nri akwụkwọ nri gị, tinye ya na akwa nhicha ọcha ma ọ bụ akwa nhicha akwụkwọ ma kpoo ya. Nke a ga - enyere gị aka ị rite ezigbo uru na nri gị ma ọ ga-aba uru maka oge ahụ. Esi otu ụzọ ahụ oge ọ bụla: Mgbe agụụ na-agụ anyị, ụzọ kachasị mfe bụ isi nri n'ụzọ anyị siri mara ya.
Nke ahụ dị mma nwa oge, mana ọ na-agwụ ike. Akwukwo nri nwere ike sie ya otutu uzo. Ọ ga-enyekwara ụmụaka aka ndị anaghị enwe mmasị n’inwe akwụkwọ nri nke ukwuu, kpebie ụzọ kacha mma isi esi nri ha, ma jiri menu dịgasị iche mara ha.
Akwụkwọ nri sizinin: Akwukwo nri ọ bụla nwere uto pụrụ iche. Mana nke ahụ apụtaghị na ị gaghị agbakwunye ọzọ. Nnu na ose dị mma, mana ha ezughi.
Akwukwo nri nwere ike ichota na nkpuru nke tamari, amino acid, broth, mmanya na akwukwo nri. Enwere ike ịtụba ha n'ime ngwakọta ọkacha mmasị gị na ngwa nri. Site na igbanwe ekpomeekpo nke sizinin i nwere ike iwere akwukwo nri dika akwukwo nri ma sie ya iri na abuo di iche iche na nri obula ga ato uto ma puru iche.
Ejighi Egwu Egwu Tupu Isi nri: Dị ka ndị okenye toro, akwụkwọ nri na-egbu pesticide dị ka celery, akwụkwọ nri, ose na-atọ ụtọ, na tomato niile na-egosi na ndepụta ọrụ kwa afọ nke Dirty Dozen, ma ọ bụrụ na ị na-asacha akwụkwọ nri ndị a ngwa ngwa ma ọ bụ na ị gaghị asacha ma ọlị, ị 'O yikarịrị ka ị ga-eji ndị kemikal fọdụrụnụ nke nwere ike ibute mgbu afọ, ọgbụgbọ, na afọ ọsịsa. Kasị njọ, kemịkal ndị a anaghị abịa ma pụọ. Ha na-ezo n'ime mkpụrụ ndụ abụba gị ruo mgbe ị ga-eri nri wee bido ibu.
Dị ka ndị na-eme nchọpụta si kwuo, kemịkal na-apụta site na ụra ma gbaa n'ime ọbara dị ka pound na-ada, na-ebelata iji ike na metabolism. Ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-azụta nri mgbe niile, tinye akwụkwọ nri gị na mmiri mmiri maka minit 10-15 tupu ị rie ya. Mgbe ahụ, sachaa ya ọzọ obere oge n'okpuru mmiri na-agba agba iji jide n'aka na ọ dị ọcha.
Ugbu a ị maara banyere mmejọ ndị i mere mgbe ị na-esi nri na akwụkwọ nri, ịmara nke kachasị mma maka ahụike gị dị mkpa n'ihi na ọ bụghị akwụkwọ nri niile ka ha nhata. Nweta Azịza Gị N’ebe a: Mụta Banyere 9 n’ime nri na-edozi ahụ na mbara ala ma ọ bụ Mụta maka akwụkwọ nri asatọ dị mma ị ga-eri na 8 Ikwesighi ị nweta isiokwu abụọ a ga - enyere gị aka ịchọta akwụkwọ nri dị mma maka gị Ọ bụ ahụ ike. . Ọzọkwa, echefula inwe mmasị na ịdenye aha na ọwa anyị.
Ego ole ka mperi na-eme kwa mgbe kwa mgbe? anyị maara na ihe ndị a kwuru n'okpuru!
Kedu usoro esi nri nke kachasị mma iji jigide nri?
Steam bụ otu n'imeụzọ kacha mma isi esi nrimaka ichebendị na-edozi ahụ, gụnyere vitamin ndị nwere ike ịgbanye mmiri, nke na-emetụta okpomọkụ na mmiri (4, 5, 6, 17). Ndị na-eme nchọpụta achọpụtala na broccoli, spinach, na letus na-agba ume na-belata vitamin C ha naanị site na 9-15% (5).Jenụwarị 24. 2017 Nọvemba
N'oge a ihe niile na-emetụta iri nri siri ike. Kedu nke nwere nri ndị ọzọ? Nke a ọ bụ n'efu? Bọta bụ Carbohydrate? Taa anyị ga - enyere gị aka ma mee ka ị mata otu ị ga - esi nweta ọtụtụ nri na akwụkwọ nri gị. Akwụkwọ nri dị mma maka na ị juputara na vitamin dị mkpa anyị chọrọ, mana ahụ anyị enweghị ike ịme ha n'onwe anyị.
Nri ndị a na - enyere gị aka ịrụ ọrụ, too, ma lụsoo ọrịa ọgụ. Ka m nye gị nchịkọta nchịkọta nke vitamin ngwa ngwa. Mmiri soluble mmiri nwere ihe antioxidant na-enyere aka na mmezi anụ ahụ ma belata ihe ize ndụ nke ọrịa obi.
Mkpụrụ vitamin ndị nwere abụba abụba dị mma maka anya, umeji, ọbara na ọkpụkpụ. Akwukwo nri buru kwa ezigbo nri nke na - edozi usoro di nkpa n’ime aru. Magnesium na-eme ka uru ahụ, irighiri akwara, ọbara, na ọkpụkpụ dị ike ma dịrị mma.
Iron dị oke mkpa maka uto na hemoglobin, protein nke na - eburu oxygen n'akụkụ ahụ gị. Get nweta ya. Nri dị gị mma.
Ugbu a ị ga-amụta otu esi eme ka ọtụtụ akwụkwọ nri gị. O nwere ike ịbụ na ị nụla na mkpụrụ osisi dị mma karịa gị, mana nke ahụ nwere ike ọ gaghị abụ eziokwu mgbe niile. Y’oburu n’icho ihe ichoro n’oge ha, kari nwaa ngwa ahia.
N’otu nnyocha, ndị ọkà mmụta sayensị chọpụtara na ọ bụ nanị otu ụzọ n’ụzọ anọ nke vitamin C ka a na-emeghere oyi agwa. E jiri ya tụnyere akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ dị jụụ, nke furu ụzọ atọ nke vitamin C n’ime otu izu. Isi nri nwere ike ịbụ nnukwu ụzọ iji nweta akwụkwọ nri niile a na-atọ ụtọ. Okpomọkụ ahụ na-ebibi mgbidi mkpụrụ osisi, na-ahapụ vitamin na mineral maka ịmịkọrọ mfe, mana enwere ike ịda mba.
Nnukwu ihe na-akpata ọnwụ ihe na-edozi ahụ bụ mmiri nri gị. Ọ na-amịpụta eriri mmiri na vitamin nwere ike ịme mmiri, na-ahapụrụ gị mmiri bara ụba ma akwụkwọ nri gị adịghị mma dịka ha nwere ike. Ndị nchọpụta chọpụtara na broccoli esi nri furu efu ihe dị ka 35% nke vitamin C ya, ebe steaming kpatara ihe gbasara 20% ọnwụ na microwave na nrụgide nri naanị kpatara ọnwụ 10%.
Agbanyeghị, ifuru apụtaghị na ebibiri gị ka ị na-eri ihe. Site na mmiri a na-esi nri, dịka ọmụmaatụ n'ime ofe ma ọ bụ ihendori na-atọ ụtọ, ị nwere ike nwetaghachi nri ndị a niile. You nwere ike ibelata ịsa akwa site na iji obere mmiri na belata akwụkwọ nri na nnukwu chunks maka obere ekpughere.
Okpomọkụ na mmanụ bụkwa ajọ mmadụ maka nri na-edozi ahụ. Vitamin na-agbaji na oge ọkụ ọkụ ogologo, ebe mineral na-anagide okpomọkụ ka mma - ihe ị ga-atụle mgbe ị na-ahọrọ n'etiti anụ ọkụ ọkụ ma ọ bụ ogologo anụ. Mmiri miri emi bụ nhọrọ kachasị mma na-adịghị mma.
Na-awụ akpata oyi n'ahụ m maara Ọ bụghị naanị na mmanụ frying na-ewepu abụba - vitaminite na-agbaze nwere ike iwe ọkụ na oke ọkụ dị ọkụ nke na ọtụtụ ogige enweghị ike ịlanarị. Marakwa na o ghere eghe. Ya mere, nri a nwere ọnụahịa ya: na nke a, abụba abụba juputara na, dabere na etu esi ghee ha, abụba trans.
Nke a bụ ebe onwu nwere ike inyere gị aka. Chemicalkpụrụ chemical nke ihe ndị dị ka ihe ịgbaze pụtara na ị nwere vitamin soluble mmiri na mmiri na abụba-soluble ndị I tụfuru vitamin na mmanụ esi. MA a nwekwara ike iji gị uru.
Iri nri nwere vitamin nwere abụba nwere obere abụba nwere ike inyere ahụ gị aka ịmịkọrọ nri ndị na-edozi ahụ. Otu nnyocha chọpụtara na iri letus yana avocados ma ọ bụ iji mmanụ esi edozi nyere ndị sonyere aka inweta ọtụtụ carotenoids ahụike karịa letus mgbe niile .Ọ bụrụ na ị ga-eji ezé gwọọ salad ahụ, mgbakwasa ahụ na-ete mmanụ ga-enwe ezigbo obi ụtọ ịmịkọrọ abụba soluble vitamin - cheta otu esi agbari.
Nke ahụ na-eme ka ọ dị mfe maka vitamin ndị ahụ iji nyefee nri na ahụ gị, gịnị ma ị rie ha naanị raw, nri? Ọfọn, enwere ihe kpatara ịhapụ nri, dịka ọmụmaatụ, karọt na pekere nduku juputara na eriri. Ma ọ bụghị otú ahụ mfe. Nnyocha e mere na 2008 gosiri na ndị nri zuru oke nwere karịa ọkwa beta-carotene, antioxidant nke na-agbanwe oroma karọt ma na-enyere aka ịnọgide na-enwe ahụ ike na anya.
Ma ha nwere lycopene dị ala karịa, antioxidant nke na-eme ka tomato bụrụ akara ụghalaahịa ha, ma jikọtara ya na mbelata ọrịa kansa na ọrịa obi. Nke ahụ bụ n'ihi na isi nri na mmanụ na-eme ka lycopene bụrụ nke mebiri emebi nke ga-adị mfe maka ahụ gị. N’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, isi nri na-eme ka ị nweta ụfọdụ ihe ndị dị mkpa.
Yabụ oge ọzọ ị na-esi nri ma ghara ịtụ ahịa maka ihe ndị ọzọ, jiri ndụmọdụ ndị a wee nweta ọtụtụ nri na ngwaahịa gị yana ekpomeekpo. Cheta na akwukwo nri obula di ka snowflake puru iche ma ha ejigide nri ha n'uzo di iche iche dabere na isi ha esi. Kedu akwụkwọ nri kachasị amasị gị na otu ị si akwadebe ha? Akwụkwọ nri anyị na-amasị m, nke ọma na-amị amị ma tinye ya na mmanụ oliv, Parmesan na galik, galik na galik ndị ọzọ.
Mgbe ezuru garlic, hapụ anyị ọkacha mmasị gị na nkwupụta na hey ekele maka ikiri.
Kedu ụzọ kachasị mma isi esi anụ?
Akọrọ Heat- Akọrọ okpomọkụụzọnkeesi nrindị kwesịrị ekwesị n'ihi na obi he nkeanụma ọ bụ obere nro dị nro nke agba. Akọrọ okpomọkụụzọgunyere astmịkpọ, sie broiling, grilling, pan-broiling, panfrying na bido-frying. Gwa-ihe ausoronkeesi nriakwadoro maka ibu he nkeehi, anụ nwa ehi, anụ ezi na atụrụ.
Taa na Oge Nọrọ n’ụlọ, m ga-egosi gị otu esi esi nri anụ ọhịa zuru oke oge ọ bụla. Usoro a na - arụ ọrụ maka steak ọ bụla, ọ ga - enyere gị aka imeri ibe anụ zuru oke oge ọ bụla naanị na m ga - egosi gị otu esi eme ya, ihe mbụ ị ga - eme bụ ịdọpụta steaks gị ma hapụ ha ka ha nọdụ na ụlọ okpomọkụ ma ọ dịkarịa ala Nkeji 30. Ọ bụrụ na ị na-eji steaks oyi kpọnwụrụ, ịkwesịrị ibupụta ha na ngwa nju oyi, mana ịchọrọ ka ha bụrụ ọnọdụ ụlọ.
Ọ bụrụ n’ịchọpụta na anyị na-eji steak mara ezigbo mma. Osisi gbara ọkpụrụkpụ dị mfe n’ezie iji sie ike zuo okè. Steaks na-adị larịị na-esi nri ngwa ngwa, ọbụnakwa nwee ike ịkpọ nkụ, yabụ họta steak dị oke mma.
Taa, anyị na-eji steaks dị warara nke New York, mana otu ụzọ ahụ na-arụ ọrụ na ribeye ma ọ bụ T-ọkpụkpụ ma ọ bụ ọbụna fillet wee họrọ steak nke masịrị gị nwere ike ịhụ na steak a nwere ọmarịcha ọmarịcha na abụba ụfọdụ n'èzí. Enwere n'ezie 3 dị iche iche B-Grade eef: Họrọ, Nhọrọ na Prime, na ihe niile dabere na ịba na ụtọ nke anụ ehi. Ugbu a ọdịiche dị n'etiti Họrọ na Nhọrọ dị oke mma, yabụ ana m akwado ịhọrọ ma ọ dịkarịa ala Choice ma ọ bụ Prime Grade beef mgbe ị na-eme steak..Nke a bụ n'ezie klaasị New York nke kachasị elu. na ụlọ okpomọkụ 30 nkeji, kpoo oven gị na 375 degrees Fahrenheit ma kpoo nnukwu ite dị ọkụ na stovu ruo mgbe ọ na-ese anwụrụ anyị na-akwadebe steaks anyị.
Jiri mmanu oliv jiri mmanu oliv obula mee ya, n’elu ya, gbue ya n’ala. Mgbe ahụ, anyị ga-etinye rub anyị. Taa, m ga-eme ka ọ dị mfe ma jiri naanị nnu na ose jikọta ya.
Aga m eji ngaji nnu 1, ngaji ngaji nke ose na 1/2 obere ocha wee gwoo ihe ndi a nwere ike itinye ogwu na akwukwo nri ndi ozo, mana m choro ya ma hapụ ka anụ ahụ na-enwu. Anyị na-ewere ngwakọta a ma fesaa ya na steaks anyị niile ma kpochaa ya ozugbo ma ịchọrọ ijide n'aka na ị ga-eme n'akụkụ abụọ. Ugbu a steaks ndị a dị oke oke, ịchọrọ ịga karịa nke ị ga-eche.
Tupu anyị esi nri anyị steaks Ihe ikpeazụ anyị chọrọ ime bụ ime ihe. Ọ na-amasị m ịgbakwunye butter na steaks m, n'ihi ya, m na-eme ụfọdụ butter butter site na iji ndụdụ iji jikọta okpukpu abụọ nke butter butter na 1-2 cloves nke garlic a gweriri. I nwekwara ike ịgbakwunye ahihia ohuru na bọta a ka ọ bụrụ butter butter, mana m ga-eji obere galik mee ka ọ dị mfe.
Ọzọ anyị ga-afụnwu ọkụ ma ejiri m n'aka na pan anyị na-ese anwụrụ ọkụ, nke bụ ihe anyị chọrọ. Tinye steaks ozugbo na pan. Don'tkwesighi itinye mmanụ ọ bụla ma ọ bụ ihe ọ bụla, anyị ga-enyocha akụkụ ọ bụla nke ibe anụ ahụ maka minit 2-3 kwa akụkụ.
Ma ebe ọ bụ na ndị a nwere obere abụba nke na-agbada n'akụkụ, ị chọghị ka abụba dị ala, gbanye ya n'akụkụ ya wee jiri pọọsụ jide ya ebe ahụ. Na-achọ mgbe nile ị na-emefu abụba ahụ ka ị ghara iji otu abụba abụba dị n'akụkụ ọnụ ya. Ozugbo etinyere ya na akụkụ abụọ ma ị mee abụba ahụ, gbanye ya n'ime oven iji mechaa nri.
Oge ọ na-ewe iji hapụ steaks gị na oven dabere na oge ole ị gwụchara steak gị na otu o siri sie ike. Rulekpụrụ isi mkpịsị aka dị mma bụ ihe dị ka nkeji 5 kwa inch, mana ọ bụrụ na ịchọrọ nsonaazụ ziri ezi 100%, jiri temometa anụ. Ana m adọpụta steak m mgbe ọ na-akụ ogo 130 Fahrenheit maka ezigbo ọkara dị obere.
Iberibe anụ ahụ kwesịrị ịnọdụ ala ma ọ dịkarịa ala minit 10 tupu ị na-eje ozi, n'ihi ya ị ga-achọ itinye tablespoon nke butter na nke ọ bụla ka ọ gbazee n'elu steak mgbe ọ na-ezu ike. Mgbe ị na-ahapụ ka steaks gị zuo ike, ọnọdụ dị n'ime ga-aga n'ihu na-ebili site n'ihe dị ka ogo 5. Ọ dị mkpa ikwe ka steaks gị zuo ike n'ihi na ọ na-enye ha ohere na a ga-eweghachi ihe ọicesụ juụ ahụ n'ime anụ ahụ, na-enye gị steak kachasị mma, nke kachasị mma.
Mgbe nkeji iri nke ezumike ị dị njikere iri nri! Daalụ Maka uzommeputa zuru ezu, lee nkọwa edemede. Denye aha, Dị ka ma soro nlele akwụkwọ m ndị ọzọ, ebe ị nwere ike ịchọta ọtụtụ narị usoro nri ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ ị nwere ike ịme n'ụlọ. Ka ahụ ma emechaa!
Kedu anụ kacha mma nwere ike iri?
5Anụ ahụ ike
Buffalo (Bison) N’agbanyeghi ocha ochaanụnwere ike ịbụ, ọ gaghị emezu agụụ maka uhieanụ.
Anụ ezi. Nri anụ ezi na-adịbu na ndepụta ndị dọkịta.
Ọkụkọ. Na-acha ọchaanụkaara gị ezigbo mma karịa uhie - ọ bụ eziokwu a ma ama.
Toro toro. Nnukwu nnụnụ a ahụtụbeghị mgbe ọ na-abịa.
Ọkt 9 2009
N’isiokwu nke taa, anyị ga - ekwu maka ụdị anụ anọ kachasị gbasiri ike ị nwere ike iri. Anụ ọkụ na anụ arụ, na n'ụzọ na-ezighi ezi, n'ime iri afọ ole na ole gara aga, yabụ njikọ dị n'etiti anụ, nke na-ebute ọrịa dịka ọrịa obi na ọrịa kansa, adịghị ike nke ọma, mana ọ ka ga-ezu ịhapụ ọtụtụ n'ime anyị pụọ na anụ na anụ uhie. Karịsịa mba ndị dị n’Ebe Ọdịda Anyanwụ arewa na-eri anụ karịa mgbe ọ bụla ọzọ, mana n’ụzọ ụfọdụ ọrịa ndị anụ na-ata ụta na-aba ụba. Eziokwu bụ na anụ na-edozi ahụ nke ukwuu ma dịkwa mma maka ahụike anyị, ọ nwere ọtụtụ vitamin na mineral nke anyị na-enweghị ike ị nweta site na osisi naanị, nke mere ya akụkụ dị mkpa nke nri anyị, mana nke bụ eziokwu bụ, ụfọdụ anụ bụ ahụike dị mma karịa anụ ndị ọzọ, yabụ n'isiokwu nke taa, anyị ga-agafe ụdị anụ ahụ anọ kachasị mma ị nwere ike ime hey ndị mmadụ nabata na ọwa m ma ọ bụrụ na ị dị ọhụrụ ebe a aha m bụ kait na m bụ onye nlekọta ahụike na m biputere isiokwu banyere nnukwu abụba na-edozi nri dị ukwuu ma ọ bụrụ na ị masịrị isiokwu a, biko nye ya mkpịsị aka aka nweere onwe gị ịkekọrịta na ịdenye aha ma soro m na Instagram, Twitter na Facebook ebe m na-ekekọrịta ọhụụ ọhụrụ kwa ụbọchị dịka m kwuru na mmalite nke isiokwu a na anụ ahụ ezighi ezi ruo ọtụtụ iri afọ mmụọ ọjọọ.
Otu n’ime ihe mbụ kpatara ya bụ na o nwere kọlestrọl, e chekwara na cholesterol a na-eri nri ga-eme ka ogo ọbara kọlestrol dị anyị elu ma bute ọrịa obi. Ọ na - apụta na cholesterol nri anaghị enwe mmetụta ọ bụla na ogo kọlestrọl ọbara anyị, na --emepụta ihe karịrị 70% nke kọlestrọl dị n’ọbara anyị ma na - emezi pasent ahụ na ego anyị na - eri na nri. Mgbe anyị na-erikwu cholesterol site na nri, ahụ anyị na-ewepụta obere, na mgbe anyị na-erikwu cholesterol site na nri, ahụ anyị na-emepụta ọbara karịa mgbe cholesterol nri na-abawanye ma ọ bụ na-ebelata, ọbụlagodi ntuziaka usoro nri nke United States nyere ndụmọdụ mmachi nri ya na cholesterol na 2015.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere cholesterol na ọrụ ya na ahụike anyị, etinyere m isiokwu na isiokwu ahụ n'izu gara aga nke ga-eme ka anyị dokwuo anya. Isi ihe ọzọ kpatara anụ anaghị ahụ ahụike bụ n'ihi na o nwere abụba juputara na oke, mana abụba nri anyị na-eri apụtaghị abụba n'ọbara anyị maka ya. Enwere ihe akaebe na-abawanye na oke abụba abụghị ihe kpatara ọrịa, mana ọ bara uru na ahụike anyị.
Anụ na-enyekwa protein dị ka agwa na mkpo, ọ bụghị naanị na ị nwere ike nweta protein karịa obere kalori, mana protein n'onwe ya nwere ike ịnweta, na mgbakwunye na vitamin na mineral na anụ. enwere ike ịnweta kwa. Were vitamin A dịka ọmụmaatụ, ebe ụdị dị iche iche nke edozi a na-agakọkarị.
Ha dị ezigbo iche na beta carotene, nke bụ ụdị vitamin A nke achọtara na osisi gbanwere n'ime retinol maka ahụ iji. The ọsọ na nke anyị nwere ike ime nke a akakabarede bụ nnọọ ngwa ngwa. Ihe kariri ọkara nke ndị mmadụ nwere mkpụrụ ndụ ihe nketa nke na-emebi mgbanwe a nke ukwuu.
Retinol bụ ụdị vitamin A nke naanị a hụrụ na nri anụmanụ yana n'ihi na agbanyelarịrị tupu a gbanwee ya, anyị nwere ike ịmị ma jiri ya mee ihe karịa, mana ka anyị rute anụ anọ kachasị mma ị nwere ike iri yana site na agbanyeghị Nọrọ na njedebe n'ihi na chee na onu ogugu nwere ike iju gi anya na anu ehi ano ka anyi bido n’anu ehi dika m kwuru na mbu na e mehiere anu ehi kemgbe otutu afo - a gwara anyi ka anyi gbutuo ya ka oburu nke anu aru, ma eziokwu bu na anu ehi bu otu. nke ụdị anụ kacha mma iri, amino acid dị mkpa dị mkpa anyị niile ga-eri kwa ụbọchị maka ezigbo ahụ ike. Anụ ehi na ụdị protein ndị ọzọ niile ka a na-ahụta dị ka ihe zuru oke nke protin ka ha nwere amino acid itoolu dị mkpa n’usoro zuru oke. A na-ahụta protein ndị na-edozi ahụ ezughi oke na ọ dị mkpa ijikọ ọnụ iji nweta amino acid niile dị mkpa na ọnụego ziri ezi, ọnụọgụ protein ị nwere ike inweta na steak ounce anọ, nke ahụ bụ naanị calorie 180, mana protein abụghị naanị ihe kpatara ya gịnị kpatara nke ahụ bụ Amịrị ehi dị ukwuu Ehi bụ ruminants, nke pụtara na ha nwere usoro nri nke emepụtara iji wepụta nri sitere na osisi.
A na-eri nri na afọ pụrụ iche tupu mgbaze dị ka ụmụ mmadụ, ọ bụrụ na anyị ga-eri otu osisi ahụ ehi na-eri, anyị nwere ike anyị agaghị enweta otu ụdị uru ahụ n'ihi na ebughi usoro sistemu anyị ime ya, mana nke a bụ ihe dị mma gbasara nri niile ehi ndị ahụ si na sistemu nsị ha dị mgbagwoju anya na-ezigara anyị mgbe anyị riri anụ ha ugbu a, n'ihe metụtara ma ị ga-eri anụ ahịhịa 100 r nke a bụ isiokwu a na-arụrịta ụka na ya banyere uru nri. , ha mara mma dika anu ahihia na-enye ume bu obere ihe kariri ma ihe di iche di obere, enwere ihe ndi ozo iga aga maka anu ahihia ahihia ma m onwe m na-agbali inweta beef 100 nyere ahihia mgbe obula m nwere ike, mana eziokwu bụ na ọtụtụ ehi na-etinye ọtụtụ ndụ ha n'ebe ịta ahịhịa, otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ ma ọ bụrụ na mmefu ego gị bụ 100 ahịhịa na-azụ ehi. N'ezie, họrọ na enwere ụfọdụ nhọrọ ọnụ ala ga-apụta ma gaa na weebụsaịtị winwild.org mgbe ị nọ na North America na-etinye gị na mpaghara mpaghara.
E nwekwara ụlọ ahịa ebe a na-egbu anụ na ezigbo ndị obodo ma ọ bụrụ na ị nọ na US ma ọ bụ Canada. Azụlitere anụ, mana ọ bụrụ na mmefu ego gị anaghị eri ahịhịa, obi amamikpe maka ịzụrụ anụ 3 Oregon nkịtị. Nke a bụ ụdị anụ dịtụ iche karịa ụdị anụ ọ bụla, mana ekwesịrị m itinye offal na ndepụta a.
Anụ anụ nri, na ụdị anụ ọhịa dị iche iche, na-edozi ahụ nke ukwuu. Ha bụ nri ndị na-edozi ahụ na ahịa na vitamin na mineral. Imeju imeju na-agbapụta ihe ọ bụla ọzọ na mmiri, mana akụrụ, splin, na akụkụ ndị ọzọ dị oke mma ugbu a.
Ihe mere na etinyeghị m ọnụ ahịa nke mbụ na ndepụta a bụ n'ihi na ị na-eri ha naanị na obere mkpa iji ya. Otu ugboro abụọ imeju obere umeji kwa izu ga-enyere aka ịbelata nri gị. Enweghị onye na-anụ ụtọ uto imeju, ị nwere ike ghaa ya ma gwakọta ya na anụ ehi.
Mee burgers patties na nke a bụ ụzọ dị mfe iji zoo ya na nri gị na ọbụnadị achọpụta ya. Nhọrọ nke ọzọ bụ iji okpu imeju beef kwupụta nhọrọ a n'ihi na a na-ajụ m oge niile mgbe ndị mmadụ chọrọ iri imeju maka uru ọ bara ma ọ nweghị ike iguzo uto ahụ, ma ọ bụrụ na ha ewere capsules imeju isii beef kwa ụbọchị. dị gburugburu otu Iri nri abụọ nke anụ ehi imeju kwa izu branddị a na m eji kemgbe afọ ole na ole gara aga bụ nri na-eri nri ma ọ masịrị m n'ezie n'ihi na ihe niile sitere Australia si anụ anụ kacha mma ma ha bụ obere ezinụlọ ulo oru ndi oru ugbo lara ezumike nka. Ha malitere imepụta ngwaahịa a n'ihi na ha nwetara uru nke imeju anụ ehi maka onwe ha ma chọọ ime ka ha nwekwuo ike ịnweta, mana ee, ọ bụrụ na ịchọrọ ịnwale ha, m ga-ejikọ ngwaahịa ahụ na igbe nkọwa dị n'okpuru ebe a nwere koodu iji belata pasent iri chekwaa salmon abụọ maka ụfọdụ ihe kpatara ya, azụghị azụ dị ka anụ, nke m chere dị iche, mana taa anyị na-ewere ya anụ.
Salmọn bụ azụ mmiri na-asọ oyi na ụdị azụ ndị a bụ otu n'ime isi mmalite omega-3s yana ọ dị mkpa iburu n'uche na ụdị omega-3s dị na azụ bụ ụdị kachasị mma ị nwere ike iri, ụdị omega-3s dị na mkpụrụ na mkpuru Ihe bu onye mbu n’iru ihe na-edozi aru Mgbe inwetara ya n’uzo ingestion a, aru gi ghaghi igbanwe ya, usoro ntughari a di oke njo. Kinddị omega-3 fatty acids dị na azụ dị ka salmon agbanweelarịrị ka ị nwee ike iji ọtụtụ n'ime ha na omega-3 dị ezigbo mkpa maka ahụike ụbụrụ anyị, ahụike obi, yana ahụike anyị na nkwonkwo dịka anyị kwurula na mbụ. , ihe oriri na-edozi ahụ dị n'etiti ahịhịa na nke a abụghị nke ahụ buru ibu, mana mgbe ọ bịara salmọn ihe dị iche n'etiti anụ ọhịa jidere na ịzụ ihe ka mkpa, yabụ n'ọnọdụ ahụ, m ga-agba gị ume ka ị banye n'okike ọhịa ma ọ bụrụ na ị nwere ike ibi ugbu a mba ebe ọ naghị adị mfe ịnweta salmọn anụ ọhịa. M bi na Australia dịka ọmụmaatụ ma mara mma nke salmọn ọhụụ a na-akọ ugbo ọ dị nwute na nhọrọ ọzọ bụ ịzụta ya mkpọ.
Nwere ike ịzụta salmọn mkpọ ebe anụ ọhịa jidere ebe a ma ọ bụrụ na ịnweghị ike ịchọta nke ahụ, nhọrọ ndị ọzọ yiri nke a bụ sardines, makarel, azụ azụ na azụ anchovy. Ọ bụ otu nọmba atụrụ dịka atụrụ ehi bụ ndị nwere ike ịkọ nri ha tupu ha ghaa Nwa Atụrụ a. dị nnọọ ka nri nke amịrị. Ihe dị iche n’etiti ebule na anụ ehi bụ na, n ’mba ụfọdụ, a na-azụ atụrụ n’oke ala naanị n’ebe ịta ahịhịa, ọ bụ naanị n’elu ebe ịta nri ka a na-azụ ya. na masts, ọ ka na-edozi ahụ.
Nwa atụrụ bu kwa otu uzo kachasi nma nke stearic acid, udiri abuba zuru oke nke amara maka aru ike ya, a na enweta ahihia nke anumanu, na abuba ufodu osisi. Ọmụmụ ihe emere na ụmụ oke ebe ejikọtara ya na stearic acid - Mgbe a na-enye ha nri linoleic ma ọ bụ nri oleic acid-nke siri ike, ndị nyocha ahụ chọpụtara na otu stearic acid na-ebelata abụba visceral site na pasent 70. E jiri ya tụnyere ndị ọzọ, ọmụmụ ahụ kwubiri na stearic acid dị na nri nyeere aka belata abụba visceral yana nke na-ebute obere shuga shuga na ọkwa leptin bụ anụ m kachasị mma iri anọ ugbu a tupu anyị emechie.
Achọrọ m ikwu na nkenke banyere anụ ezi na ọkụkọ na ihe kpatara na ha emeghị ya na ndepụta ahụ, n'agbanyeghị na echeghị m na ezi na ọkụkọ kwesịrị izere kpamkpam. Enwere ọtụtụ ihe kpatara na etinyeghị m ha. Ezi na ọkụkọ bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe dịka anụmanụ ọ bụla na ọ dị nwute na ọnọdụ ka njọ karịa anụ ehi, a na-enyekarị ha ọka na soy, nke dị iche na nri ha n'ihi anụ ezi a na ọkụkọ nwere ọtụtụ omega-6s karịa ihe dị mma bu.
Omega-6 dị ukwuu na nri anyị bụ mkpali na ọ dị nwute na ọtụtụ n’ime anyị na-eri oke oge, mana nke a bụ p. Isi mmalite nke omega-6 na nri anyị bụ mmanụ ihe oriri nke adịghị mma maka ọtụtụ ebumnuche mana otu n'ime ha bụ omega 6th Yabụ ọ bụrụ na ị wepụlarị mmanụ nri niile na nri gị, nke ahụ bụ ọtụtụ ọgụ, gụnyere anụ ezi na ọkụkọ na nri nwere ike ịdị mma. N'ezie, ị nwere ike ịzụta anụ ezi na ọkụkọ na ahịhịa.
Nke a bụ nhọrọ ka mma, mana ọ bụrụ na anyị atụlee uru nri ụmụ anụmanụ ndị a bara na nke m kwuru na mbụ na ndepụta m, anụ ezi anụ, salmọn na atụrụ, anụ ezi na ọkụkọ, ọ ka anaghị atụnyere ndị bekee, nke ahụ bụ ihe niile m nwere maka gị taa nwere. Echere m na ị nwere mmasị na edemede a ma ọ bụrụ na ị na-eche banyere mmasị na ịdenye aha ya ma mee ka m mara ihe anụ kachasị amasị gị na ngalaba nke dị n'okpuru ebe a, ọ bụrụ na ị na-aza ajụjụ n'ezie, m ga-enwe ekele maka ịza ajụjụ gị karịa. Nke ahụ na-ewetara ndị mmadụ edemede m.
YouTube na-atụ aro ya ọzọ. Yabụ ee, ọ bụrụ na ịhapụ okwu, nwee ekele maka ya ma ọ bụrụ na isiokwu a masịrị gị, ị ga-amasịkwa edemede m na nri ise kachasị mkpa iji tufuo ibu. Can nwere ike lelee ya ebe a ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịchụkwudo ihe kachasị ọhụrụ m bulite. You nwere ike ịchọta ya ebe a, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịlele usoro ịkụzi nri m na nke anụ oriri, ị nwere ike ịchọta ya ebe a maka ekele ọzọ, hụ gị oge ọzọ
Kedu nke na-edozi ahụike ma ọ bụ sie?
Ojiri ihe ọkụkụọkụkọ nabutereọkụkọ nwere uru ọ bara uru, n'agbanyeghị.Na-egwe ihe, n’aka nke ọzọ, na-emepụta ekpomekwu na-enweghị atụ ma na-eme ka abụba na-atapụ anụ, na-ebelata kalori ọ na-agụ. Otú ọ dị,mmirinwere ike ịdị kagbasiri ikema ọ bụrụhaala na ị gbakwunye mmanụ, bọta na abụba ndị ọzọ.Mwube 23 2019
Kedu nke na-eme achịcha ka mma ma ọ bụ ighe?
Ime achịchanaimi iheha abụọ kpọrọ nkụesi nriusoro ị nwere ike iji esi nrigbasiri ikenri. Ebe enwere uru nkemmirinri ma ọ bụimi ihenri, ị kwesịrị izereighe. Nke ahụ apụtaghị nammirinaimi ihebụ naanịgbasiri ikeụzọ ezie.29 nke Dec 2019
Kedu ụzọ kachasị dị irè isi esi nri anụ iji jigide micronutrients ya?
Okpomọkụ nke ịmị na mmiri si na 300-425 Celsius F (149-218 Celsius C) naesi nrioge nwere ike ịdị iche site na nkeji 30 rue elekere ma ọ bụỌzọ, dabere na ụdị na ịkpụ nkeanụ. N'ikwu okwu n'ozuzu, ịmị na ịme achịcha bụ ụdị ahụike dị mmaesi nrinke ahụ na - ebute ntakịrị vitamin C.
Kedu ụzọ kachasị mma isi esi akwụkwọ nri iji jigide vitamin kachasị ukwuu?
Ebe ọ bụ naakwụkwọ nrina-adịghị na kọntaktị naesi nrimmiri n'oge steaming, ọzọvitamindịejidere. Akọrọụzọ esi nridị ka ịkwa ọka, astghee ya na ịkwa eghejigidenke ka ukwuuegonke nri karịaesi.Eprel 13 2015
Kedu otu esi esi esi anu rue mgbe o ghapuru?
Nwayọesi anụna-eme yagbasasịa. Nwere ike ịkwado, ma ọ bụ jiri nwayọesi nrinke gianụtupu itu ya n'ime gị chili iji nweta nsonaazụ kacha mma. Ikekwe ị chọghịesi nrigị chili ka ogologo dị kaanụ. Ọ ga-atụgharị na mush.
Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na m rie anụ ahụ kwa ụbọchị?
Gịnwere ikemụbaa ohere gị nke ọrịa dịka ụfọdụ ọrịa kansa na ọrịa obi. Ọmụmụ ihe na - ejikọkarị ihe na - acha uhie uhie ma hazie yaanụ na-ihe ize ndụ ka ukwuu nke ụfọdụ ọrịa cancer, nakwa ọrịa obi.Mar 3 2020